Zvose zvehupfumi hwako huri kuunganidzwa huchashandiswa kukubatsira kuita kwako kushanyira panzvimbo yedu yepamusoro sekubudirira uye kunakidza sezvinobvira.
Chibvumirano chekuvanza kwemashoko ega evanhu vanoshandisa nzvimbo yedu yakakosha kune Safe Safe.
pachako ruzivo All pamusoro nhengo, subscribers, vatengi kana vaenzi vanoshandisa Sarudza Kuchengeteka achange kubatwa zvinoenderana Data Protection Mutemo Personal 26 1998 October (Mutemo No. 67 / 98).
Mashoko evanhu akaunganidzwa anogona kusanganisira zita rako, kero ye email, nhare yefoni uye / kana nhamba yefoni, kero, zuva rokuzvarwa uye / kana zvimwe.
Kushandisa Kusarudzwa Kwakasarudza kugamuchira kwako kubvumirana kweChinhu Chibvumirano Chekuita. Sangano reSegura rinowana kodzero yekushandura chibvumirano ichi pasina chiziviso chisati chaitika. Nokudaro, tinokurudzira kuti uongorore mutemo wega wega wega wega kuitira kuti iwe ugare uchienda kune imwe nguva.
Kufanana nedzimwe mawebsite, tinounganidza uye tinoshandisa ruzivo rwakatengeswa mumashamba. Mashoko ari shambadzo zvinosanganisira IP wako (Internet Protocol), wako ISP (Internet basa Provider, akadai Toad, Clix, kana mamwe), kuti Browser iwe aiwanzoshanyira yedu yepaIndaneti (akadai Internet Explorer kana Firefox), nguva yekushanya kwako uye mapeji awakashanyira mukati rewebhu redu.
Google, sevatengesi vechitatu, anoshandisa makiki kuti aratidze zvikwata pawebsite yedu;
NeDOC cookie, Google inogona kuratidza zvikwata zvinobva pakushanyira muverengi akaitwa kune mamwe mawebsite paInternet;
Vashandi vanogona kudzivisa DART cookie nekushanyira content network privacy uye Google ads.
Tinoshandisa makiki kuchengetedza ruzivo, zvakadai sezvaunofarira paunoshanyira webhusaiti yedu. Izvi zvinogona kusanganisira kuve nyore, kana kubatana kune mamwe mabasa atinopa, akadai seforamu.
Mukuwedzera, tinoshandisawo zvitatu zvekutengeserana pane webhusaiti yedu kuti titsigire mari yekugadzirisa. Vamwe vevashambadziri vanogona kushandisa zvigadzirwa zvemhando dzakadai sekiki uye / kana web beacons pakushambadzira pahutaneti redu, izvo zvichaita kuti vatengesi ava (saGoogle kuburikidza neGoogle AdSense) vagamuchirewo ruzivo rwenyu rwega, se IP address, ISP yako, browser yako, nezvimwewo. Izvi aiwanzoshandiswa kugadzira geotargeting (anoratidza kushambadza muna Lisbon chete vaverengi kubva Lisbon semuenzaniso.) Kana kuratidza zvimwe shambadzo tichifunga aishandisa mhando (akadai kuratidza kubika shambadzo kuti rokushandisa uyo anoshanyira kubika site kugara, semuenzaniso. ).
Muchichengeta simba kudzima makeke yenyu mubrowser zviruva, kana pakushandisa zvaunofarira mapurogiramu Anti-Virus maturusi, akadai Norton Internet Security. Zvisinei, izvi zvingashandura kuti unoshanda sei newebsite yedu, kana mamwe mawebsite. Izvi zvinogona kukanganisa kana usarega logins mapurogiramu, kana nzvimbo kuti forum yedu uye nemimwe network.
Kushamwaridzana neZvikamu Zenharaunda
Kusarudzwa kwakachengeteka kunobatana kune dzimwe nzvimbo dzatinotenda kuti dzinogona kunge dzine ruzivo rwakakosha / zvishandiso kune vashanyi vedu. Sangano redu rega rega harisi kushandiswa kumawebhusayithi evanhu vatatu, naizvozvo kana iwe ukashanyira imwe nzvimbo kubva pawebsite yedu unofanira kuverenga mutemo wega wega wega.
Isu hatisi mhaka yehutungamiri hwehupfumi kana hutano huripo kune mamwe masayiti.